पैसा कम दिएको भन्दै पुर्व युवराज पारसले जब म्यानेजरलाइ मुक्का बर्साए ! – AB Sansar
October 28, 2020 adminLeaveaComment on पैसा कम दिएको भन्दै पुर्व युवराज पारसले जब म्यानेजरलाइ मुक्का बर्साए !
काठमाडौ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका बालसखा प्रभाकर राणालाई जब पारसको खबरले झस्कायो, तब उनी स्त’व्ध भए । प्रभाकरले सोचेका थिएनन्, पारस अहिले पनि कोहीमाथि जाइलाग्छन् ।घटना पोहोरकै हो । पूर्वयुवराज पारसलाई पोखरामा पैसाले साह्रै मुस्किल भएपछि बाबु ज्ञानेन्द्रलाई फोन गरे । उनले साथी प्रभाकरलाई फोन गर्न भनेअनुसार पारसले त्यसै गरे । ****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
त्यसपछि प्रभाकर केही पर, एकान्तमा पुगे ।लगभग १०–१५ मीनेट कोहीसँग फोनमा कुरा गरेर साथीहरू भएको ठाउँमा फर्किए । त्यसबेलासम्म पनि उनको अनुहार राम्रोसँग खुल्न सकेको थिएन । त्यहाँ बस्नेहरूको अनुमान थियो– कि त प्रभाकरले ज्ञानेन्द्रलाई फोन गरेर पारसको हर्कतबारे सुनाए । कि, फेरि फिस्टेलमा फोन गरेर पारसले भनेजति पैसा दिन लगाए । जनआस्था साप्ताहिकबाट । ****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
सोमबार देखिका सब परीक्षा स्थगित, एसईईबारे पछि निर्णय हुने नेपाल सरकारको सहमति